ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့် မွေးစားခြင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
ရောင်စုံတီဗီသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များအတွင်း အီတလီတွင် ထွက်ပေါ်လာသောအခါတွင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့သည် လုံလောက်သောစမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်ဘဲ ကြည့်ရှုသူများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ဆိုကာ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက တီဗီအများစုကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ သူတို့မှန်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အစိုးရက နားမလည်တဲ့အတွက် ထိန်းညှိဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
ပထမဦးစွာ “passing fad” ဟုယူဆကြပြီး၊ ထို့နောက်စကားလုံးတစ်လုံးလုံးတွင်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့တစ်လုံးရှိလူတိုင်းကအလုံးအရင်းလက်ခံကြသည်။
David Letterman Show အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Bill Gates က အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကို ရှင်းပြနေတာကြောင့် ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာကို သတိရမိပါတယ်။
Bill: [အင်တာနက်] သည် လူများ သတင်းအချက်အလတ်များ ထုတ်ဝေနိုင်သည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာနေပြီး အီလက်ထရွန်နစ် အီးမေးလ်များ ပေးပို့ခြင်း…”
Interviewer- “လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က အင်တာနက်မှာ သူတို့ ဘေ့စ်ဘောဂိမ်းတစ်ခု ထုတ်လွှင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု ကြေငြာချက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး “ရေဒီယိုက ခေါင်းလောင်းမြည်သလား?” “အား….။
Bill : “မင်း လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်း နားထောင်လို့ရတယ်”
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ- “တိပ်ခွေတွေက ခေါင်းလောင်းမြည်သလား???”
ဟိုး…။ ကြည့်ရတာ ရိုးရိုးသားသား နာကျင်ခဲ့ရပေမယ့် Bill က ရယ်နေခဲ့တယ်။ သူနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊
ငါဘယ်သွားမလို့လဲ မင်းသိပေမယ့် ပြတ်သားစေချင်တယ်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ ကြီးကြီးမားမားတွေ ပါလာတိုင်း လူတွေက ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့ နှိမ့်ချယုံကြည်ပါတယ်။
“ပြောင်းလဲမှု” သည် လူများကို ကြောက်လန့်စေသောကြောင့် လက်ရှိအနေအထားကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ အိမ်ပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များပြောင်းခြင်း (lol) သည် လုံခြုံရေးကိုရှာကာ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တောင့်သက်သာရပ်ဝန်းတွင်နေရန် အစီအစဉ်ဆွဲထားသောကြောင့် ကြောက်စရာကောင်းသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည် စားနပ်ရိက္ခာကြွယ်ဝသော လိုဏ်ဂူကောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါက ၎င်းတို့သည် “သူတို့၏ သက်တောင့်သက်သာဇုန်မှ ထွက်သွား” ပြီး ၎င်းတို့၏ နောက်တစ်ကြိမ် အစာစားရန်အတွက် ခြင်္သေ့အချို့ကို တိုက်ခိုက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ပြောင်းလဲမှုက ကြောက်စရာကောင်းပြီး ဒီနည်းပညာက နားလည်ရခက်ပါတယ်။ တချို့လူတွေက အဲဒါကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ ခက်တယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ နှစ်အတော်ကြာနေခဲ့ပြီး အသစ်အသစ်တွေကို နေ့တိုင်း သင်ယူနေဆဲပါ။
အများသဘောတူထားသော ယန္တရားအသစ်များ၊ ကွဲပြားသော blockchain အမျိုးအစားများ၊ တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ မိုင်းလုပ်သားများ၊ နှုန်းထားများ၊ မက်လုံးများ၊ oracles စသည်ဖြင့် ရှိသည် ။ သင်ပိုမိုလေ့လာလိုလေလေ သင်ပိုမိုလေ့လာလိုလေလေ သင်ယူစရာများစွာရှိလေလေဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ လူအများစုသည် ၎င်းကို နားလည်ရန် ဦးနှောက်စွမ်းအားကို အသုံးမပြုချင်သောကြောင့် ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကို တည့်တည့်ပြောပါရစေ- အဲဒါကို မလေ့လာချင်ဘူး။ အီးမေးလ်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်မသိသော်လည်း ၎င်းတို့ကို နေ့စဉ်အသုံးပြုနေပါသည်။
အင်တာနက်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲတော့မသိပေမယ့် နေ့တိုင်းသုံးနေပြန်တယ်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ စာတိုပေးပို့မှု၊ တီဗီစသည်တို့နှင့် အတူတူပင်။
အဲဒါက နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကို အသုံးချဖို့ အချိန်ယူရတာကြောင့် လူတွေက လန့်သွားကြတယ်။
လူအများစုသည် ၎င်းတို့နားမလည်သောအရာကို မကြိုက်သောကြောင့် ၎င်းကို ဖြုန်းတီးပစ်ကြလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့နောက်ကွယ်ရှိအရာများကို အမှန်တကယ်မသိဘဲ နည်းပညာကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိရှိလာသည်အထိ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ဖြုန်းတီးပစ်ကြမည်ဖြစ်သည်။
စောနေသေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူသည် ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးကို စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ မျိုးစေ့ချထားသော စကားစုကို ရေးမှတ်ရန်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများတွင် ပါဝင်ရန်၊ $AAVE ၊ Uniswap၊ Pancakeswap၊ Curve၊ ထို့နောက် မှန်ကန်သော လောင်းကြေးပံ့ပိုးပေးသူကို ရှာဖွေရန်၊ ထို့နောက် ပိုက်ဆံအိတ်များကြားတွင် တိုကင်များ ပေးပို့ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူအတွက် ခက်ခဲနေပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် သန်းနှင့်ချီသောလူများကို အယူခံဝင်ရန် မသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ဖောက်သည်ဗဟိုပြုမှုနှင့် အတွေ့အကြုံများအပေါ် အာရုံစိုက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ လူတိုင်းသည် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသောကြောင့် ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအသစ်များသည် blockchain တွင်မွေးဖွားလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ Web3 သည် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများမှ သုံးစွဲသူများထံ ပါဝါလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိရှေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
$BTC နှင့် $ETH သည် 1 နှစ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါ။ ဤနည်းပညာများသည် ကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေမည်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအခြေခံကမ္ဘာမှ အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိသည့် တူညီသောလူများထံမှ ခုခံမှုကို တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွက် အထက်ဖော်ပြပါ crypto တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုစိတ်ရှိပြီး ထိုထက်ပို၍ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုပြောခြင်းဖြင့်၊ crypto တစ်ခုချင်းစီသည်တူညီသည်မဟုတ်ပါ၊ စတော့အားလုံးသည်တူညီသည်မဟုတ်ပါ။
BTC ကို TurtleCoin နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် $TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) ကို Theranos နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် တူသည်။ ပြီးတော့ Theranos မှာ လက်မှတ်မရှိရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်။
တပ်ဆင်ထားသည့် ၃လွှာ၊ အဖေဦးထုပ်၊ စားပွဲခုံ၊ ကလေးမျက်နှာဖုံး၊ သံလိုက်၊ ဘေ့စ်ဘောထုပ်၊ Mouse Pad၊ Dog Mat၊ Pet Bandana၊ Pet Blanket၊ Cat Mat၊ Active T-Shirt၊ Baseball ¾ လက်စွပ် တီရှပ်၊ Classic T-Shirt ဂရပ်ဖစ်တီရှပ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Hoodie၊ ပေါ့ပါးသောအင်္ကျီ၊ လက်ရှည်တီရှပ်၊ တီရှပ်အရှည်၊ ပရီမီယံတီရှပ်၊ Pullover Hoodie၊ Pullover Sweatshirt၊ Racerback Tank Top၊ Sleeveless Top၊ Essential T-Shirt၊ Tank Top၊ Tri – ရောစပ်ထားသော တီရှပ်၊ V-လည်ပင်း တီရှပ်၊ ဇစ်ပ်အင်္ကျီ၊ A-Line ဂါဝန်၊ Chiffon ထိပ်၊ တပ်ဆင်ထားသော ရှပ်အင်္ကျီ၊ တပ်ဆင်ထားသော တီရှပ်၊ V-လည်ပင်း တီရှပ်၊ ဂရပ်ဖစ်တီရှပ် ဂါဝန်၊ ဘောင်းဘီတို၊ မီနီစကတ်၊ ပရီမီယံ Scoop တီရှပ်၊ စိတ်အေးလက်အေး အံဝင်ခွင်ကျ တီရှပ်၊ စတစ်ကာ၊ တောက်ပသောစတစ်ကာ၊ လက်တော့ပ်အရေပြား၊ လက်ပ်တော့အင်္ကျီ၊ ဖောက်ထွင်းစတစ်ကာ၊ iPad Skin၊ iPad Snap Case၊ iPhone Skin၊ iPhone Snap Case၊ iPhone Soft Case၊ iPhone အကြမ်း Case၊ iPhone Wallet၊ Samsung Galaxy Skin၊ Samsung Galaxy Snap Case၊ Samsung Galaxy Soft Case၊ Samsung Galaxy Tough Case၊ Art Board Print၊ Art Print၊ Canvas Mounted Print
Tags: AFNAlbanian Lekaltcoinaltcoins၊ teslaAOAAruban FlorinAWGAzerbaijani ManatAZNBahamian ဒေါ်လာBAMBarbadian ဒေါ်လာbardBBDBCHBDTBelize ဒေါ်လာBGNBHDBIFBinance USDbitcoinBitcoin ငွေသားblockchainBMDBNDBRLBSDbtcBTC ကိုထုပ်ပိုးထားသည်။BTNBurundian FrancBUSDBWPBYNBZDCape Verdean ShieldCDFCFA ဖရန့် BCEAOCFA ဖရန့် BEACCFP ဖရန့်CHFCircle USD CoinCLFCLPCRCcryptocrypto ငွေကြေးcryptocurrenciescryptocurrencycryptopunksCVECzech KorunaCZKDGSDJFDKKDOGEdogecoinDZDEGPeqETBethethereumEthiopian BirrEUR ထက်FJDFKPGELGemini US ဒေါ်လာGhanaian CediGHSGibraltar ပေါင်GIPGMDGTQGUSDGYDHaitian GourdeHNLhodlHRKHRMHTGHUFHungarian ForintIDRILSINRIQDISKJEPJMDJODJSTKazakhstani TengeKESKHRKMFKPWKRWKWDKyrgystani SomKZTLAKLaotian KipLBPlitecoinLKRLRDLSLltclydMacanese အာလူးMADMalawian KwachaMaldivian RufiyaaMauritanian OuguiyaMauritian ရူပီMDIMGAMKDMMKMNTMOPMoroccan DirhamMVRMWKMXNMYRMZNNADnerdNGNNIONOKNZDOmani RialOMRPABPAXPaxos Standard USDPDOPENPGKPHPPKRPLNPYGQARRONRSDRUBRWFS.O.SSalvadoran ColumbusSamoan TalaSão Tomé နှင့် Príncipe Dobrasatoshisatoshi nakamotoSBDSCRSDGSEKSeychellois ရူပီShiba InuShibataSHPSLLSRDSTNSVCSwazi LilangeniSYPSZLtesla အင်ဂျင်များTHBTMTTNDTTDTWDUAE DirhamUAHUGXUS ဒေါ်လာUSDCUYUUZSVESVNDVUVWBTCWSTXAFXAGXAUXCDXOFXPFxrpYERZZMWZWLကင်ညာ ရှီလင်ကနေဒါဒေါ်လာကမ္ဘောဒီးယား ရီးယဲကျူးဘားပီဆိုကြိုးစားပါ။ကွန်ဂိုဖရန့်ကာတာရီရယ်ကိုမိုရီယန်ဖရန့်ကိုလံဘီယာပီဆိုကီလိုဂရမ်ကုန်သည်ကုန်သွယ်မှုကူဝိတ် ဒိုင်နာကေဒီကေမန်ကျွန်းဒေါ်လာကော်စတာရီကန် ကိုလံဘတ်ချီလီပီဆိုချီလီအကောင့်ယူနစ် (UF)ခရိုအေးရှား Kunaခုန်ဂမ်ဘီယာ ဒါလားစီဂျပန်ယန်းဂျမေကန်ဒေါ်လာဂျာစီပေါင်ဂျီဘီပီဂျီဘူတီယန်ဖရန့်ဂျေပီဝိုင်ဂျော်ဂျီယံ လာရီဂျော်ဒန်ဒီနာဂွာတီမာလာ Quetzalဂိုင်ယာနာဒေါ်လာဂီနီဖရန့်ငွေ (ထရွိုင်အောင်စ)ငွေကြေးငွေသားငါ D ရှိတယ်။ငါကြားသည်။စင်္ကာပူဒေါ်လာစပါးစိတ်ဆိုးစိန့်ဟယ်လီနာပေါင်ဆွဇ်ဖရန့်ဆွီဒင်ခရိုနာဆားဘီးယား ဒိုင်နာဆိုမာလီ ရှီလင်ဆီယာရာလီယွန် လီယွန်ဆီးရီးယားပေါင်ဆူဒန်ပေါင်ဆူရီနမ်ဒေါ်လာဆော်ဒီ Riyalဆော်လမွန်ကျွန်းစုဒေါ်လာဇင်ဘာဘွေဒေါ်လာဇမ်ဘီယာ Kwachaတန်ဇန်နီးယား ရှီလင်တရုတ်ယွမ်တရုတ်ယွမ်ငွေတွန်ဂန် ပါ့ အန်ဂါတာ့ခ်မင်နစ္စတန် Manatတာဂျစ်ကစ္စတန် ဆိုမိုနီတူနီးရှား ဒိုင်နာတူရကီ Liraတောင်ကိုရီးယားဝမ်တောင်အာဖရိက Randထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုဒေါ်လာထိပ်တန်းထိုင်းဘတ်ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာအသစ်ထောင့်ဒိန်းမတ်ခရိုနာဒိုမီနီကန် ပီဆိုနမီးဘီးယားဒေါ်လာနယူးဇီလန်ဒေါ်လာနယ်သာလန် Antillean Guilderနိုင်ဂျီးရီးယား Nairaနီကာရာဂွါ ကော်ဒိုဘာနီပေါရူပီနော်ဝေခရိုနာပနားမား Balboaပရာပြုတ်ကျနေတယ်။ပါကစ္စတန်ရူပီးပါပူဝါနယူးဂီနီ တရုတ်ပါရာဂွေးဂွာရာနီပိုက်ဆံပိုလန် Zlotyပီရူး နူဗို ဆိုးလ်ပေါင်စတာလင်ဖလားဖိလစ်ပိုင်အလေးချိန်ဖီဂျီဒေါ်လာဖော့ကလန်ကျွန်းစုပေါင်ဗင်နီဇွဲလား အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် Bolivarဗာနူအာတူ Vatuဗီယက်နမ်ဒေါင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာကာဘရာဇီးလ် ရီးရဲလ်ဘရူနိုင်းဒေါ်လာဘလက်ဗယ်ရီသီးဘာမြူဒါဒေါ်လာဘာရိန်း ဒီနာဘိုလီးဗီးယား ဘိုလီးဗီးယားဘီလာရုရူဘယ်ဘူဂေးရီးယား Levဘူတန်လူမျိုး Ngultrumဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား Convertible Markဘော့ဆွာနန်ပူလာမက္ကဆီကန်ပီဆိုမက်ဆီဒိုးနီးယား ဒေနာမြန်မာကျပ်ငွေမြောက်ကိုရီးယားဝမ်မလေးရှားရင်းဂစ်မွန်ဂိုလီးယား တူဂရစ်မိုင်းရယ်မိုဇမ်ဘစ် Meticalမီးရှို့မော်လ်ဒိုဗန် လီယူယီမင် ရီရယ်ယူကရိန်း Hryvniaယူဂန်ဒါ ရှီလင်ယူရိုဇုန် ယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဝမ်ဒါဖရန့်ရွှေ (ထရွိုင်အောင်စ)ရိုမေးနီးယား Leuရုရှားရူဘယ်ရေလှိုင်းရဲလက်ဘနွန်ပေါင်လစ်ဗျား ဒီနာလှိုင်းဂယက်လိုက်ဘေးရီးယားဒေါ်လာလီဆိုသို Lotiသင်သတ္တုတွင်းသြစတြေးလျဒေါ်လာသီရိလင်္ကာရူပီသေဟွန်ဒူးရပ်လမ်ပီရာဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာအင်ဂိုလန် Kwanzaအင်ဒိုနီးရှားရူပီယာအစ္စရေး တကျပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာအယ်လ်ဂျီးရီးယား ဒိုင်နာအရှေ့ကာရေဘီယံဒေါ်လာအာဂျင်တီးနားပီဆိုအာဖဂန် အာဖဂန်အာမေးနီးယန်းဒရမ်အာလာဂါစီ Ariaryအားလုံးအိန္ဒိယရူပီးအိုက်စလန်ဒစ်ခရိုနာအီဂျစ်ပေါင်အီရတ် ဒိုင်နာအီရန် Rialအီသာဥဇဘက်ကစ္စတန်ဥရုဂွေးပီဆို
May 23, 2022 by admin Burmese - မြန်မာစာ 0
Next Danas govorimo o promjenama, inovacijama i usvajanju.
Previous Сёння мы гаворым пра змены, інавацыі і прыняцце.